Taliyaha NISA Sanbaloolshe oo qiray in dowladda Federaalku wareejisay Sarkaalkii ONLF | SAHAN ONLINE
Taliyaha NISA Sanbaloolshe oo qiray in dowladda Federaalku wareejisay Sarkaalkii ONLF
MUQDISHO – Taliyaha Hay’adda Nabasugida iyo Sirdoonka Qaranka Cabdullaahi Maxamed Cali (Sanbaloolshe) ayaa markii u horeysay qiray in dowladda wareejisay Sarkaalkii ka tirsanaa ONLF kaasoo maalmo ka hor loo gacan geliyey dowladda Itoobiya.
Taliye Sanbaloolshe oo si lama filaan ah uga dafay Ra’iisal Wasaaraha su’aal la weydiiyey oo ku saabsanayd arrinta Sarkaalka ONLF Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi dhagax ee ahaa in dowladda ku wareejisay Itoobiya,wuxuu xusay in arrintan ay tahay mid xasaasi ah isla markaana waqtigeeda iyo goobteeda looga jawaabayo.
Ra’iisal Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa isna ku raacay Taliye Sanbaloolshe,isagoo yiri “Madaxda Qaranka waxaa la yiraahdaa hey’adaha Sirdoonka ayaa u taliya, hadii uu na afduubo, isaga noo xog ogaalsan dalka amnigiisa”.
Warsaxaafadeed uu soo saaray ururka ONLF ayey ku eedeeyeen dowladda Soomaaliya inay u gacan gelisay Itoobiya Cabdikariin Sheekh Muuse,iyagoo ku eedeeyey dowladda Soomaaliya iney ku xadgudubtay Dastuurka iyo Xeerka Caalamiga ah iyo midka dalka Soomaaliya.
Si kastaba arrintan ayaa dhalisay fadeexad ay dowladda dhexe fariisatay,iyadoona Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka ay si kulul uga hadleen ,kuna tilmaameen in la galay qiyaano qaran.